Ma taxriim baa yoo xaaraam miyaa arrintaasu mise waa karaaha keliya? To find out more, including how to control cookies, see here: Siduu u keenayaa waxa weeyaan, meeshii kaadidu ay ku dhacday marka lagu shubo wadaan buuxda, biyihii way qulqulayaan oo meeshay kaadidu gaartay meel aan ahayn bay sii gaarayaan. Nin reer baadiye ah ayaa yimid dabadeedna wuxuu ku kaajay qayb masjidka ka mid ah, markaa dadkii baa ku qeyshay, Nebiguna sallal Laahu calayhi wasallam wuu ka reebay mmaraam ku qayliyaan], markuu kaadidiisii dhammeeyey buluuquul Nebigu- sallal Laahu calayhi wasallam- wuxuu amray [in la keeno] wadaan biyo ah, kadibna waa lagu kor shubay. Markaa xadiisku saxiix weeyaan.
Ninkuna sidoo kale weeyaane, haweenay biyo ay ku qabeysatay aanu kaga daba qabeysanin intay soo reebtay. Siday yeelayaan markaa? Xadiiska isnaadkiisuna waa saxiix, isnaadka ragga weriyey [xadiiska] baa la yiraahaa. Ibhaamkaasi xadiiska wax ma u dhimaayaa? Xadiiska ibhaamkaasi waxba u dhimi maayee, haddaan xataa ninkaasi ninkuu yahay aan la garanin kolka mar haddii inuu saxaabi yahay naloo sheegay waxba u dhimi maayee xadiisku sidaas saxiix buu ku noqonayaa; daciif kuma noqonayo.
Illeen saxaabada- ridwaanul Laahi calayhim- kulligood waa wada caadiliin weeyaan oo Allaaba taskiyeeyey  - ridwaanul Laahu calayhim- laakiin hadduu weriye raawi kale ahaan lahaa oo saxaabi aan ahayn xadiisku sidaas daciif buu ku noqon lahaayoo sida fannu musdalaxil xadiis lagu yaqaano qofka mubhamka ah [aan magaciisa la sheegin] iyo qofka majhuulka [aan la garanayn] ahba riwaayadooda lama qaato. Markaa ninkaasu ninkee buu marka noqonayaa? Waxaa jira laba nin oo asaxaabo ahoo midkoodba arrintaa laga weriyey, oo midkood waxaa la yiraahaa Cabdullahi ibn Sarjis, ka kalena waxaa la yiraahaa AlXakam ibn Camr al Qifaarii, - radiyal Laahu canhum- labadaa midkood inuu yahay ayey u eg tahay.
Inuu mid kale yahayna waa iska suuroowdaa, kollaba ibhaamkaas xadiiska la ibhaamiyey waxba xadiisku kuma noqonayo xadiisku saxiix weeyaan. Marka xukunku wuxuu noqonaayaa [haddii] raggiyo haweenku intay isla galaan musqusha- dabcan labadii isqabta weeyaan- [oo] ay iskula qabeystaan weelkana dhexdooda intay dhigtaan wada dardarsadaan inaynan dhib lahayn.
Kitaabka Buluuqul Maraam - Sheekh Xasan Ibrahiim Ciise